Alaska mivadika ho Airbus 32X?
fanontaniana Alaska mivadika ho Airbus 32X?
1 taona 5 volana lasa izay #1008 by pgde
Misy olona manana alakamisy ho an'i Luis Quintero ao amin'ny fonosana Airbus 320? Izany dia hanolo ilay virjiny izay nikambana tamin'i Alaska.
1 taona 5 volana lasa izay #1009 by Dariussssss
Afaka mikaroka azy amin'ny Google ianao. Saingy, aza mitady ny F-Dore A320, ny PA A320 Alaska Livery fotsiny ihany, ny antony, dia ity tetikasa ity no tetikasa fampandrosoana Airbus A320. Manantena izany fa hanampy.
Fotoana mamorona pejy: 0.145 segondra